Gumaad ka dhacay dalka Ingiriiska. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Gumaad ka dhacay dalka Ingiriiska.
On May 23, 2017 204 0
Warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegaya in qof hubeysan islamarkaana watay suunka walxaha qarxa uu gudaha u galay hool uu ka socday Xaflad iyo Miyuusug oo ku yaala magaalada Macnchester.
War kasoo baxay dowladda Ingiriiska waxaa lagu sheegay in weerarkan uu yahay weerar “Argagaxiso oo argagax badan”, waxaana haweeneyda Ra’iiisul wasaaarada ka ah dalka Ingiriiska Trezy May ay tacsi u dirtay Ahallada dadka lagu gumaaday weerarkaas.
Waa weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee dhawaantan ka dhaca dalka Ingiriiska, waxaana uu kusoo aadaya iyadoo dhawaan hogaamiye sare oo katirsan Al-Qaacida uu kaligii duulayaasha ku dhaqan wadamada Reer galbeedka uu ugu baaqay iney qaadana weeraro xoogan, waxana sidoo kale uu imaanaya iyadoo dowladda Ingiriiska ay mudooyinkii ugu dambeysay sheegeysay iney sare u qaaday heeganka dhanka amniga ah.